परिवारको साथमा हुँदा शून्यतामा पनि महानताको अनुभूति ! | Suvadin !
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस आज
परिवारको साथमा हुँदा शून्यतामा पनि महानताको अनुभूति !
परिवार शब्दको खोजी गर्ने हो भने अंग्रेजी भाषामा प्रयोग भएको फ्यामिली शब्द ल्याटिन भाषाको फ्यमुलुसबाट ल्याइएको हो। ल्याटिन भाषामा फ्यामुलुसको अर्थ हुन्छ बाबुआमा, तिनीहरूका सन्तान वा सेवकहरू, जसमा सहयोगको अदानप्रदान गरिन्छ । म्याक्लभर र पेजेका अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चत एवम स्थायी यौन सम्बन्ध द्वारा परिभाषित एउटा यस्तो सानो समूह हो, जसले बच्चाहरू उत्पादन गर्ने र तिनीहरूको लालनपोषणको उचित व्यवस्था गर्ने कार्य गर्दछ ।
परिवार एकै घरको छानामुनी बस्ने एकै भान्साको खाना बाँडेर खाने, विवाह, रगत, ग्रहण, वा सम्रपणको सम्बन्धभित्र आबद्ध सदस्यहरूको समूह हो । ‘परिवार महत्त्वपुर्ण कुरामात्र होइन, यो त सबथोक हो ।’ हलिउड अभिनेता माइकल जे. फक्सले परिवारबारे गरेको टिप्पणी हो यो । संसारभर सुखको सबैभन्दा ठूलो स्रोत परिवारलाई मानिन्छ । तर, मान्छेको जीवनमा हुने निराशा र हारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पनि परिवारिक समस्यासँगै जोडिएको हुन्छ । भनिन्छ- फ्रेन्च सम्राट नेपोलियनको पतनमा उनको पारिवारिक विखण्डन र विचलनको पनि हात थियो ।
यसकारण जीवनको सुरुवातदेखि मृत्युपर्यत्‍न परिवार कुनै न कुनै रुपमा हरेक पलमा गरिने गतिविधिको हिस्‍सेदार बनिरहेको हु्न्छ । पूर्वीय दर्शनमा त झन परिवारकोबिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
समयक्रमसँगै संयूक्त परिवारलाई क्रमशः एकल परिवारमा रुपान्तरण र प्रतिस्थापित गरेको भए पनि परिवारको स्वरुप जेजस्तो होस् तर पारिवारीक मुल्य मान्यता भने आँउदो पुस्ताका लागि अत्यन्त जरुरी पाठ हुन् । प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा र बालवालिका र यूवामैत्री पारीवारिक वातावरणको वकालत गर्दै आज विश्व भरि परिवार दिवस मनाइँदै छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको नारा 'परिवार र वातावरणीय परिवर्तन, १३ औं दीर्घकालिन विकासका लक्ष्यमा जोड' रहेको छ । सन् १९९३ बाट मे १५ लाई परिवार दिवसका रुपमा संयूक्त राष्ट्रसँघको आब्हान अनुरुप मनाईन थालिएको हो ।
व्यक्तिहरु मिलेर बनेको परिवार अनि परिवारहरु मिलेर बनेको समाज अनि समाजहरु मिलेर बनेको देश, आजको दिनले देशको समग्र परिवर्तनमा परिवारको भुमिका अनि त्यसबाट संसारको रुपान्तरणको पैरवी गर्दछ ।
परिवार बलियो भनेमात्रै सिंगो देश बलियो हुनसक्छ । त्यसका लागि परिवार बलियो बनाउन जरुरी छ । परिवार बलियो बनाउन परिवारभित्र कोही पनि महत्त्वकांक्षी हुनुभएन । परिवारको सदस्यले देख्‍ने सपना कहिल्यै ठूलो र उडन्ते हुनुहुँदैन । हामी स–साना खुशीमै रमाउन सिकेको परिवार नै खुशी र सुखी हुन्छ । एक्लै जति सफलता हात पारे पनि त्यो सफलताको खुशी साट्‍ने मान्छे भएन भने व्यक्तिको सफलताको कुनै मूल्य हुँदैन । अनि मान्छेलाई ठूलो दुख परेको छ र त्यो दुख बाँड्‍ने मान्छे भएन भने बाँच्नुको विकल्प खोज्‍जतिर लाग्नसक्छ । त्यसकारण सुखदुखमा साथ दिन र पर्दा हात दिने परिवार महान हुन्छ । परिवार साथ भए शून्य पनि महान लाग्छ ।
परिवारभित्र हाम्रो उद्देश्य भनेको बिल गेट्स हुने अर्थात् धनाढ्य हुने भन्ने हुनुहुँदै । यस्ता महत्त्वकांक्षा र पैसाको प्यासले परिवारको खुशीमा हानी पुर्‍याउँछ । परीवारमा पैसा भएरमात्र खुशी ल्याउन सकिँदैन । त्यसका लागि प्रेम, विश्‍वास र परिवारका सदस्यलाई दिने समय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय स–सानो कारणले परिवार टुक्रिरहेका छन् । जस्तैः रक्सी खाएको कारण, अर्कोसँग बोलेको कारण, तरकारीमा नुन नहालेको, जागिर छोडेका आदि–इत्यादी । आखिर किन छुटिन्छन् परिवारका सदस्य अनि किन भत्किरहेका छन परिवार ? यी प्रश्‍नको जवाफ टुक्रिएका मनहरूलाई सोधे पुग्छ ।
पारीवारिक एकता कमजोर हुनु भनेको परिवारका हरेक सदस्य असफल र कमजोर हुँदै जानु हो । एकतामा विश्वास गर्ने नेपाली समाज आज एक्लिन खोजिरहेको छ केवल निजी स्वार्थ र सुखको भोकका लागि । तर, परिवार टुक्रयाएर त्यो सुखको भोक कहिले मेटिदैन । परिवारसँगै बसेर बरु खाली पेट एकअर्कासँग संवाद र दुखका भारी बिसाउँदा मन हलुंगो हुन्छ र मन खुशी हुन्छ ।
लगभग सबै देशमा आज वृद्धवृद्धाका लागि वृद्धाश्रम बनिरहेका छन्। जहाँ हरेक खालका सहुलियत-सुविधा पनि पाइन्छ। जुन देशमा ठूलो मात्रामा कल्याणकारी सुविधा दिने गरिन्छ, त्यहाँ परिवारका वयस्क सदस्यहरुले वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रम लगेर छोडिदिन्छन् । यो संस्कार नेपाली समाजमा पनि विस्तार हुँदैछ ।
उनीहरुलाई लाग्छ कि हरेक उमेरका मानिसलाई त्यही उमेरको मानिसको जरुरत हुन्छ। त्यसैले वृद्धवृद्धाहरुबीच सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि वृद्धाश्रम नै उपयुक्त हो। तर, ती वृद्धवृद्धाको संघर्षका कारण सफलता मिलेको भन्‍ने बिर्सिनु हुँदैन । मुलुलाई वृद्धाश्रमको घर बनाइनु हुँदैन । परिवार भनेको प्रेम, विश्वास, सम्मान र भरोसाको सम्मिलन हो । जसले खुशी प्रदान गर्छ ।
आफ्नो अनि परिवारको सोंच र आदर्शलाई फराकिलो पार्दे जिवन जीउने परिवेश ठूलो पार्न सकौँ । चाहिने कुरामा सबै सदस्यको मान रहोस्, अनावश्यक कुरामा परिवारभित्र कोहीसँग कोही नडराओस्, बैमनस्यता नहोस् अनि प्रजातन्त्र परिवार भित्रपनि कायम होस् । परिवार असल बनाउन सके राष्ट्र आफैं असल र समृद्ध बन्छ त्यसकारण सबै बूवा, आमा, दाजुभाई, दिदिबहिनीमा विश्व परिवार दिवसको शुभकामना ।